Ntụziaka Nri Dị Mfe - Ezi Ntụziaka
ụzọ kasị mma iji kwadebe oyi kpọnwụrụ agwa agwa
itinye Ezi ntụziaka na ude utoojoo na chiiz chiiz
enwere m ike esi nri anụ ezi friji
bluuberi ude cheese crepe ndochi uzommeputa
ogologo oge ka esi nri ụtọ nduku na 350
Ntụziaka Nri Dị Mfe
Nke a Ntụziaka Nri Dị Mfe ga-emecha ihe oriri ọ bụla! A na-eji grab achicha a mịrị amị, kpoo yabasị, yabasị na bọta, were ofe ma sie ya ruo mgbe ọ ga-ekpo ọkụ na ọlaedo.
Ekwela ka m mehie m hụrụ n'anya gwere poteto , ma m ga-echekwa ohere maka ihe eji eme ụlọ na nduku. Enwere m ike iri nri maka nri ọ bụla!
Otu esi eme Turkey nri
Nri bụ otu n’ime nri kachasị mkpa na ezumike ma ọ bụ mgbasa ekele. Jere ya ozi n'akụkụ agwa casserole , gwere poteto uto , toki, toki gravy (n’ezie), echefula banyere ugu achịcha maka dezaati!
Recipesfọdụ nri ndị na-eri nri gụnyere ihe ndị dị ka karọt, mkpụrụ vaịn, ma ọ bụ kranberị a mịrị amị. Ezie na ndị a niile nwere ike ịbụ nnukwu mgbakwunye, ọ nweghị ihe a ga-eji tụnyere usoro nri nri kpochapụla a!
Okuko sizinin bụ ihe kachasị mma na-esi ísì ụtọ maka ihe ndozi nri a (ma ọ nwere ike ree ya mgbe ụfọdụ n'oge Ekele)! Ọ bụrụ na ị jitụbeghị anụ ọkụkọ, ọ bụ ngwakọta nke ngwa nri dị ka sage, thyme na rosemary na ọ na-agbakwunye ụtọ ụtọ na ofe, stews na casseroles. I nwekwara ike iji ngwa nri gị (ma ọ bụ mee Arụrụ n'ụlọ Azụkọ Azụ ), Echere m na sage bụ ihe kachasị juru ebe niile na nri.
Otu esi eme nri
Ihe a na - eme ka ị nweta nri mara mma site na ọkọ bụ ijide n'aka na achịcha gị kpọrọ nkụ tupu ị gbakwunye broth. Ọ bụrụ n’ịzụta achịcha gị ụbọchị ole na ole gara aga, dọwaa ya ma ọ bụ bee ya n’ime cubes ma kpoo ya n’ime efere ụbọchị ole na ole n’elu tebulu gị. Kinddị achịcha ọ bụla ga-eme, m na-ejikarị ngwakọta nke agba aja aja na ọcha.
Na ncha, ọ na-amasị m ịrakọ cubes nri ọhụrụ na oven na 300 Celsius F iji kpoo ya maka ihe dịka 10 nkeji (jide n'aka na ị gaghị agba aja aja / tost ya)! Ọ bụrụ n ’ihicha achịcha ọhụụ n’ekwú, ọ gaghị adị mkpa ka o sie gị ofe.
Achọrọ m isi nri m na-eri nri (nke ga-eji teknụzụ mee ya akwa) ma ọ bụ ime Iberibe ite ite ite . Isi nri na toki na nri iche iche na-eme ka o doo anya na ha abụọ ruru oke okpomọkụ na-enweghị nri.
Enwere ike ịme nri tupu oge eruo ma debe ya na ngwa nju oyi n'ime ite achicha. Ọ bụrụ na ị na-eri nri toki, nri kwesịrị ịdị ọkụ ma ọ bụ dị jụụ ma ghara ị andụ ya na toki ruo tupu amịkpọ.
Y’oburu n’inwere toki gi, cheta ka o mee ka nri gi juo. Ọ bụrụ na i meghị ya, nnụnụ ahụ ga-anọdụ na ọnọdụ okpomọkụ na-adịghị emerụ emerụ maka ogologo oge. Ọ bụrụ na ị na-eri nri toki, a ga-esi nri nke nri ahụ na 165 Celsius F n'ihi na nsị sitere na nnụnụ ahụ na-abanye nri ahụ.
Nri bụ nnukwu akụkụ ebe ọ nwere ike ịme ngwa ngwa tupu oge eruo! Naanị ịkwadebe dịka a gwara gị, kpuchie ya ma kpoo ya ruo elekere 48.
Iji mee achịcha, wepụ ya na ngwa nju oyi ma ọ dịkarịa ala minit 30 tupu ị ghee. Kwadebe dị ka a gwara gị (ịnwere ike ịgbakwunye minit ole na ole ma ọ bụrụ na ọ ka dị jụụ site na ngwa nju oyi).
Etu aga-esi eri nri
Onye ọ bụla hụrụ toki nri abalị nri fọdụụrụ. Turkey nri abalị stacks ma ọ bụ sandwiches na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ ụzọ kachasị amasị m maka ịnụ ụtọ ha, mana oge ụfọdụ ịnweghị ike ịbịakwute ha site na oge ha ga-adị njọ. Atụla egwu, dị ka toki nri freezes ọma! Naanị gbapụta ya na friza ma ọ ga-adịgide ọtụtụ ọnwa.
Iji kpoo ihe oriri, gbapụta ya na oven na 350 Celsius F maka ihe dị ka nkeji 20 na obere efere na ya iji gbochie ya ihicha.
4,99site naOgbe 759votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nriOgbe 55 Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere 10 Nkeji Ọrụ12 servings Onye edemedeHolly Nilsson Ntụziaka a na-eri nri ga - emecha nri ọ bụla! A na-eji grab achicha a mịrị amị, kpoo yabasị, yabasị na bọta, were ofe ma sie ya ruo mgbe ọ ga-ekpo ọkụ na ọlaedo. Bipute Ntụtụ
▢abụọ obere eyịm okpokoro
▢4 okporo celery okpokoro
▢⅔ iko bọta
▢1 ½ teaspoons ulo ozuzu okuko ma ọ bụ ½ teaspoon ala sage
▢12 iko achịcha cubes
▢3-4 iko ọkụkọ efere
▢abụọ tablespoons pasili ọhụrụ
▢1 ngaji akwukwo nri ohuru amamihe, thyme, rosemary
Kpochapu oven na 350 Celsius.
Gbazee butter na nnukwu skillet karịrị ọkara ọkụ. Tinye yabasị, celery na anụ ọkụkọ (na rosemary ma ọ bụrụ na iji ya). Esi nri obere-ala ruo mgbe obi (adịghị aja aja), ihe dị ka nkeji 10-12.
Tinye cubes achicha n'ime nnukwu efere. Tinye ngwakọta yabasị, pasili na ahịhịa ọhụrụ.
Wunye ofe n'elu ruo mgbe cubes dị mmiri mmiri (ma ọ bụghị soggy) ma jiri nwayọọ tụgharịa. May nwere ike ịchọghị ofe niile. Oge na nnu na ose nụrụ ụtọ.
Tinye ngwakọta na efere nri, tinye ya na bọta ọzọ ma kpuchie ya.
Ime minit 35, kpughee ma mee ihe ọzọ 10 nkeji.
Ọ bụrụ na iji rosemary na ahịhịa, sie nri na eyịm / celery. Iji toye toki, a ga-eme ka nri dị jụụ kpamkpam na friji ma ọ dịkarịa ala minit 45. Na-aga n'ihu: Kwadebe dịka a gwara gị, kpuchie ya na friji ruo awa 48. Iji mee achịcha, wepu friji ma ọ dịkarịa ala minit 30 tupu ị ghee. Kwadebe dịka a gwara gị (ịnwere ike ịgbakwunye minit ole na ole ma ọ bụrụ na ọ dị jụụ site na ngwa nju oyi).
Calorisị:Ogbe 185,Carbohydrates:16g,Protein:3g,Abụba:iri na otug,Abụba Ajuju:6g,Cholesterol:27mg,Sodium:Ogbe 462mg,Potassium:175mg,Eriri:1g,Sugar:abụọg,Vitamin A:435IU,Vitamin C:6.8mg,Calcium:61mg,Iron:1.4mg
Isiokwuturkey nri Ntụziaka N'ezieNri abalị Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Gbanyụọ Ntụziaka Super a